MODA | Article Detail | Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ Tiktok ပေါ်က ချစ်စရာ ကောင်ဆိုးလေးများ
လူတွေမရှိတဲ့ တောအုပ်လေးထဲမှာ နေရတာကြိုက်တဲ့ Emily in Paris ထဲက စားဖိုမှုး Gabriel
ယူတို့ ကြွေချင်လည်း ကြွေလောက်စရာ
ခုတစ်လော နာမည်ကြီးနေတဲ့ TV Series ထဲက မင်းသားလေး Lucas Bravo ကို သဘောကျမိနေရင်တော့ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။ Emily ကိုယ်တိုင်တောင် စိတ်ယိုင်သွားရလောက်တဲ့အထိ Lucas က နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတာတင်မဟုတ်ဘူး…ရုပ်ကလေးကလည်း အကြွေဆင်ပါ။ ပြင်သစ်စကားပြော ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါဝင်ဖူးပေမယ့် နိုင်ငံတကာက ပရိတ်သတ်တွေတော့ Emily In Pairs နဲ့ သတိထားမိသွားမှာပါ။ သူကို ကြိုက်ဖို့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မလိုပေမယ့် Lucas ကို ပိုပြီးရင်ခုန်သွားစေမယ့် အချက်လေးတွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ ကဲ Ready ဖြစ်ပြီလား..
အချက်အပြုတ်ကောင်းပြီး Hot ဖြစ်လွန်းတဲ့ Chef အပြင်မှာလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ Lucas က သက်သေပြနေပါတယ်နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက စားသောက်ဆိုင်မှာ စားဖိုမှုးအဖြစ် အချိန်တော်တော်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အတွက် တကယ့်ချက်ပြုတ်ပြဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အခါလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြုလုပ်ပြသွားသူပါ။
ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံနဲ့မို့ မော်ဒယ်များလား ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့..မမှားပါဘူး အရပ် ၆ပေ ၁ လက်မရှိပြီး မော်ဒယ်အနေနဲ့လည်း ရပ်တည်နေသူပါ။ နာမည်ကြီး Brand Campaign တော်တော်များများ ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း Modeling Agency တွေနဲ့ စာချူပ်ချူပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Chanel အတွက်လည်း Ellie Bamber နဲ့ အတူကြေညာရိုက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
Real Life Disney Prince ကိုပြပါဆိုရင် Lucas ကိုပဲ ပြရမှာပါ။ ဘာလို့ဆို ထူးထူးဆန်းဆန်း တောအုပ်ထဲမှာ သွားနေလေ့ရှိသူပါ။ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ တစ်ယောက်တည်း စူးစမ်းရတာကြိုက်ပြီး သစ်ပင်လေတိုးသံတွေ၊ ငှက်သံလေးတွေကလွဲပြီး ဘာသံမှမကြားရတဲ့ နေရာတွေကို နှစ်သက်ပါတယ်တဲ့။
လတ်တလော ဘယ်သူနဲ့မှ တွဲနေတာမရှိတဲ့ Single လေးပါတဲ့။ Fan နဲ့ Date မယ်ဆို Date ချင်လားမေးတော့ သူ့မှာ Fan မရှိတော့ မသိပါဘူးတဲ့လေ။ Emily in Paris ကြောင့် Fan တွေဒီလောက်များလာတာ ခုတော့ သိလောက်မှာပါနော်။
တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်တဲ့ ခပ်ချောချောကောင်လေးကို ဘယ်သူက မကြွေပဲ နေနိုင်မှာလဲနော်။ Lucas က ခွေးချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး ခွေးလေးတစ်ကောင်လည်း မွေးထားပါတယ်။
ဖက်ရှင်ကျကျ အမိုက်စား Video တွေနဲ့ Local Tik Tok Celebrity များ
ဘယ်သူ့ Fan လဲ
Stay-Home မှာ Tik Tok လေးဆော့ပြီးအပျင်းဖြေကြရအောင်။ တကယ်လို့သင်ကိုယ်တိုင် Tik Tok ကိုဝါသနာပါပြီးသားလူဆိုရင်တော့ ဒီ Celebrity မမတွေရဲ့ Tik Tok တွေကိုတော့ Follow ထားဖို့လိုမယ်နော်။ ဖက်ရှင်တွေ၊ Outfit တွေကလည်း Style ကျနေသလို သူတို့ရဲ့ Tik Tok Video တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလည်း အမိုက်စားတွေမို့ အခုပဲသွား Follow လိုက်တော့။
Wutt Hmone Shwe Yi | @oneline20
Myat Noe Aye | @myatnoe.aye
Nang Tracy | @nangtracyyy
Patricia | @patriciasueshanaing
Phone Thiri Kyaw (Jenny) | @phonethirikyaw
Beauty | @beautythinn
May Nanda | @maynandaaa
May | @mayofficial.mm
M Seng Lu | @msenglu
May Grace | @maygraceparry
Thazin Nwal Win | @thazin_nwe_win
Kare | @karekeee
"Lovesick Girls" MV ထဲက ကောင်လေးက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ
အောက်တိုဘာ (2)ရက်နေ့က Black Pink အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album "The Album" ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ထင်မှတ်မထားတဲ့စံချိန်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှူအတော်လေးရခဲ့တာ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီ album နဲ့အတူ တစ်ပြိုင်တည်းထွက်ရှိလာတဲ့ Lovesick girls MV ဟာလည်း ကြည့်ရှူသူပရိသတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်မှူများစွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီ Lovesick Girls MV ကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်း MV ထဲမှာပါတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်အထာနဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသတိမထားမိပဲမနေနိုင်ကြပါဘူး။ Black Pink နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာကိုမဆို သိထားဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ Blink လေးတွေအနေနဲ့ Jennie , Lisa , Rose တို့နဲ့ အတူရှိနေတဲ့ကောင်လေးက ဘယ်သူများလဲဆိုတာကို စုံစမ်းအဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်။ ( ဒီထဲမှာ မမ Jisoo ကတော့ single လှလှလေးပေါ့ ) ။ တချို့ဆိုရင် Lovesick Girls MV မထွက်ခင် Teaser Video ထွက်ပြီးကတည်းက အဖြေအသည်းအသန်ရှာခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
Blink လေးတွေသိချင်နေကြတဲ့ အဲဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ လီဆောင်ဂျို ဖြစ်ပြီး Loren လို့ အားလုံးကသိထားကြတဲ့ ဂီတသမားလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ YG entertainment အောက်မှာရှိတဲ့ BLACK LABEL အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့၀င် music producer တစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ သူ့မှာတခြားအမည်တွေအနေနဲ့ DJ BOID, Cawlr လို့လည်းရှိပါသေးတယ်။ DJ BOID ဆိုတဲ့အမည်ကိုတော့ DJ အဖြစ် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပြီး Crawlr ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ producer ,music arrangement လုပ်တဲ့အခါ နဲ့ သီချင်းရေးတဲ့အခါတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Blink လေးတွေအနေနဲ့ Loren ကိုအခုမှစမြင်ဖူးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်က Rose ရဲ့ live ‌တွေမှာ ပါ၀င်ပြီး ဂစ်တာတီးခတ်ပေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ 1995 ခုနှစ်မှာမွေးတယ်လို့ တချို့ကပြောကြပြီး Rose က အိုပါး လို့ခေါ်တဲ့အတွက် အသက်23 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Rose ထက်တော့ အသက်ပိုကြီးမယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေပါတယ်။ Drum နဲ့ Guitar ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တီးတတ်တဲ့အပြင် Lovesick Girls သီချင်းရဲ့ တွဲဘက်တေးရေးဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Street wear brand တစ်ခုမှာလည်း မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Lovesick Girls ထဲမှာပါ၀င်ခဲ့တဲ့ စတိုင်လ်ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ကောင်လေး‌အကြောင်းကို တော်တော်လေး သိသွားကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Instagram caption တွေအရတော့ English ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်မယ့်ပုံပေါ်ပြီး NAVER CEO ရဲ့ သားလို့လည်း rumor တွေထွက်နေပါတယ်။ ဒီအထာကျကျကောင်လေးရဲ့ IG account ကတော့ အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း @lorenisalone ပါတဲ့။
DC ရဲ့ Super Hero ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် John Cena
Smackdown ပရိသတ်တိုင်းနဲ့လုံး၀မစိမ်းတဲ့ နပန်းသမားကြီး John Cena ကတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအသတ်အပုတ်တွေတင်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပဲ အနုပညာဘက်မှာပါ ပါရမီအပြည့်ရှိကြောင်း သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုသက်သေပြတော့မယ်ထင်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ DC ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ဖြစ်တဲ့ Peacemaker Series မှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို Suicide Squad ရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ James Gunn ကတာ၀န်ယူရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး အက်ရှင် နဲ့ ဟာသတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Super Hero ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Peackmaker ဇာတ်ကောင်က မူရင်း Charlton Comic ရဲ့အပိုင်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ DC Comics က ပြန်လည်၀ယ်ယူလိုက်တာပါ။Peacemaker ရဲ့ နာမည်က Christopher Smith ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးလိုလားတဲ့ Superhero တစ်ပိုင်း Supervillain တစ်ပိုင်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် လူဘယ်နှယောက်သတ်ရသတ်ရလို့ခံယူထားတဲ့သူတစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး ။ Comic ထဲမှာတော့ အစပိုင်းတုန်းက သူအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ မသေစေနိုင်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားမှူစိတ်ဇောအရ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ။ သူ့ရဲ့အဓိကရန်ဘက်တွေအများစုကတော့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ စစ်မက်လိုလားသူတွေဖြစ်ပြီး သူချေမှုန်းခဲ့သူတွေရဲ့ ဝိဉာဉ်တွေက သူ့ရဲ့သံခမောက်ကြီးထဲမှာပဲရှိနေပြီးသူ့ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးနေကြတယ်လို့လည်း မှတ်ယူထားသူပါ။ လက်နက်ဆန်းမျိုးစုံကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုနိုင်သလို သူ့ရဲ့သံခမောက်ကြီးကလည်းတော်တော်လေးကို စွမ်းတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီ Peackmaker Series ကို HBO ရုပ်သံလိုင်းကနေ 2021ခုနှစ် အတွင်း စတင်ပြသသွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး Season 1 မှာ အပိုင်း 8 ပိုင်းတိတိပါ၀င်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Suicide Squad ရဲ့ ဒါရိုက်တာ James Gunn ကိုယ်တိုင်ပဲ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီ Peackmaker Seriesရဲ့ အသေးစိတ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ Suicide Squad2မပြသသေးခင်အချိန်ထိ ချပြသွားဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး Peacemaker ဟာ Suicide Squad2မှာ ပါ၀င်လာမယ့် ဇာတ်ကောင်အသစ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော မြင်နေကျပုံစံကနေကွဲထွက်ပြီး သံခမောက်အဆန်းကြီးဆောင်းထားတဲ့ John Cena ကို တွေ့ရဦးမှာကတော့ တကယ့်ကိုစိတ်၀င်စားစရာပါပဲ။
COVID-19 ကူးစက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့ သမ္မတကတော်
လတ်တလော Social Media အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့ သမ္မတကတော်တို့ Covid-19 ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကို Donald Trump ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ Twitter account မှာ “ Tonight @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through tis TOGETHER!” ဆိုတဲ့ Tweet နဲ့ တရားဝင်အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းကတော့ သမ္မတရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ် နှစ်ကာလများစွာ အိမ်ဖြူတော်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Hope Hicks တစ်ယောက် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ရှိပြီးမကြာခင်မှာပဲ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီမတိုင်ခင်က “တစ်စက်ကလေးမှအနားယူခြင်းမရှိပဲ အလုပ်ကိုအရမ်းကြိုးစားခဲ့တဲ့ Hope Hicks တစ်ယောက် Covid-19 ကူးစက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ သမ္မတကတော်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်း Test အဖြေကိုစောင့်နေတဲ့အကြောင်း၊ နှစ်ဦးစလုံး Quarantine ဝင်သွားကြမှာဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို သမ္မတTrump က Twitter မှာ ပိုစ့်တစ်ခုအရင်ဆုံးတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ Public Events တွေ ၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်မှူတွေနဲ့ ဖလော်ရီဒါမှာပြုလုပ်မယ့် ဟောပြောပွဲတွေကို Cancel လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း အိမ်ဖြူတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လု့ိဆိုပါတယ်။ Hicks အနေနဲ့ သမ္မတနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးရှိနေခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလော နီးကပ်လာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲ ၊ဟောပြောပွဲတွေကို အတူတကွသွားလာခဲ့ကြတာတွေ့ရတဲ့အပြင် Mask တပ်ထားခြင်းလည်း မရှိခဲ့ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။ သမ္မတကတော် Melania Trump ကတော့ သူမနဲ့ Trump တို့ဟာ COVID-19 positive ကြောင့် အိမ်မှာ Home Quarantine ဝင်ကြသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတု့ိရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားလုံးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊တချို့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ နောက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့အကြောင်း နဲ့ အားလုံးအတူတကွဖြတ်ကျော်ကြမှာမို့ အားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုတစိုက်နေကြဖို့ အကြောင်းတွေကို Twitter ကတဆင့် အသိပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ထိချက်ပြင်းလွန်းတယ်လို့ဆိုရမယ့် Black Pink ရဲ့ “ The Album”
Black Pink ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ Blink လေးတွေအတွက်တော့ ဒီနေ့က တကယ့်ကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး နေ့လေးတစ်နေ့ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ Black Pink ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album ဖြစ်တဲ့ “The Album” ကို official release လုပ်တဲ့နေ့မို့လို့ပါပဲ။ Black Pink အနေနဲ့လည်း ဒီ Album အတွက်ကို လပေါင်းများစွာ ကြိုးစားအားထုတ်ထားခဲ့တာမို့ သူတို့လေးတွေကိုချစ်တဲ့ Blink တွေကလည်း ဒီ The Album ထွက်ရှိလာတဲ့အခါ အပြိုင်အဆိုင် Support ပေးကြဖို့ တော်တော်လေးကို စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
“The Album” ဟာ Black Pink အဖွဲ့ Debut လုပ်ပြီး လေးနှစ်တာအတွင်း ပထမဆုံးထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Full Album ဖြစ်တာကြောင့်လည်း သူမတို့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်များစွာရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှူတွေ ပိုပြီးမြင့်တက်ခဲ့သလို ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တွေနဲ့ Collaboration လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းအချို့ပါဝင်နေတဲ့အချက်ကလည်း ကမ္ဘာအနှံ့ကပရိသတ်များစွာကို တော်တော်လေးအာရုံဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ The Album မတိုင်ခင် Single အနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ How You Like That နဲ့ Ice Cream သီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာလည်း စံချိန်တင်အောင်မြင်မှူတွေ ရရှိခဲ့သေးတာမို့ အခုထွက်ရှိလာတဲ့ “The Album” အပေါ်မှာလည်း Blink အားလုံးက တော်တော်လေးမျှော်လင့်တကြီးနဲ့ရင်ခုန်ခဲ့ကြတာတွေ့ရသလို ရင်ခုန်စောင့်စားခဲ့ရတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ရလာဒ်ကောင်းတွေရရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပြန်ပါတယ်။
Black Pink အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဒီ Full Album မှာ သီချင်းစုစုပေါင်း (၈)ပုဒ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Album မှာပါဝင်တဲ့ သီချင်းတွေကိုတော့ Covid-19 Pandemic အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲ သီချင်းရေးသားဖန်တီးတာနဲ့ အသံသွင်းတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ရတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလို အချိန်များစွာယူပြီး ကြိုးစားပမ်းစားဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ The Album မထွက်ခင် Predownload ဟာဆိုရင်တောင် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းနဲ့တင် 1 Million ကျော်ခဲ့သလို Album ရဲ့ Pre-order အရေအတွက်ကလည်း 1 Million ကျော်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။ Selena Gomez နဲ့ Collab လုပ်ထားတဲ့ Icecream သီချင်းဟာဆိုရင် လက်ရှိ Youtube ပေါ်မှာ ကြည့်ရှူသူ အရေအတွက် သန်းသုံးရာကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အပြင် အခု Full Album နဲ့အတူထွက်ရှိလာတဲ့ Title Song “ Lovesick Girls” ရဲ့ MV ဟာဆိုရင်လည်း Teaser အနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာတင်ပဲ Youtube မှာ ကြည့်ရှူသူအရေအတွက် 10.3M နဲ့1.6M likes ကို ရရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
အခုဆိုရင် Title Song ဖြစ်တဲ့ Lovesick Girls ကတော့ Official MV ထွက်ရှိပြီး ခြောက်နာရီခန့်အကြာမှာပဲ Youtube ပေါ်မှာ ကြည့်ရှူသူအရေအတွက် 26 M view အထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို အံ့အားသင့်လောက်တဲ့အမြန်နှူန်းနဲ့ Viewer တွေဆက်လက်ပြီးတက်နေတုန်းပါပဲ။ Cardi B ကလည်း iTunes ကနေ The Album ကိုဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူမပါဝင်တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ Bet You Wanna သီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကို အချိန်ပြည့် ပိုစ့်တွေတင်ပြီး Support လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ PUBG Mobile Game မှာလည်း The Album ရဲ့ MV အနေနဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Lovesick Girls ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The Album ဟာ လက်ရှိမှာ US iTunes Chart အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၃၂) နိုင်ငံရဲ့ iTunes Album Chart မှာ နံပါတ်တစ်နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သလို Lovesick Girls ဟာလည်း နိုင်ငံပေါင်း (၁၃)နိုင်ငံရဲ့ iTunes Singles Chart မှာ နံပါတ်တစ်နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး Global Digital Artist Ranking မှာလည်း နံပါတ်တစ်နေရာကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ The Album နဲ့အတူ Lovesick Girls MV တို့ဟာ ထွက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီမပြည့်သေးခင်မှာပဲ အခုလို အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့စံချိန်တွေတင်နေတာမို့ သူမတို့ကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်လေးတွေအနေနဲ့လည်း ရှေ့ဆက်ပြီးအားပေးဖို့ ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်စေသလို Black Pink ရဲ့ ပထမဆုံး Full Album မှာတင်ပဲ တော်တော်လေးကို အဖွင့်ကြမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ့်သဘောပါပဲ။
#First Full Album
သေချာသလောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ Black Pink နဲ့ Cardi B တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းမှု "Bet You Wanna"
အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အောင်မြင်မှူခြေလှမ်းတွေ စိပ်သထက်စိပ်လာတဲ့ တောင်ကိုရီးယား Girl Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BlackPink ဟာ အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှူနယ်ပယ်ကို ခုထက်ပိုပြီး ဖြန့်ကျက်ဖို့ အားခဲထားသလားလို့ မေးယူရမယ့်နှစ်တစ်နှစ်ပါ။ ၂၀၂၀ နှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်ကတည်းက ကမ္ဘာကျော်အမေရိကန်အဆိုတော်တွေနဲ့ Collaboration လုပ်ထားတဲ့ Single သီချင်းတွေ ဆက်တိုက်လိုလို ထွက်ရှိခဲ့သလို ယခုချိန်ထိလည်း သတင်းသဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရသူတိုင်း ရင်ခုန်စိတ်လှူပ်ရှားသွားရမယ့် Collaboration တွေက အတောမသတ် ထွက်ပေါ်နေဆဲပါပဲ။ အခုလည်း Black Pink ရဲ့ fan တချို့ ကြိုတင်ကြားထားတဲ့ Leaked News တချို့ထဲကအတိုင်း နာမည်ကျော်အမေရိကန်အမျိုးသမီး Rapper တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Cardi B နဲ့ Collaboration သီချင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ရှိလာဦးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းက ပိုပြီးသေချာသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။
Black Pinkအဖွဲ့ဟာ ခုလတ်တလောမှာ Collaboration တွေ ခပ်စိပ်စိပ်လေး လုပ်လာတာ အားလုံးသတိထားမိကြမှာပါ။ Lady Gaga , Selena Gomezကစလို့ PUBG Mobile Game တွေအထိ ကမ္ဘာကျော် တော်တော်များများနဲ့တွဲဖက်တင်ဆက်မှူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် အဲဒီ Collaboration တွေမှာလည်း အောင်မြင်မှူတွေ အတော်လေးရရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Selena Gomez နဲ့ Collab သီချင်း Ice Cream ဟာဆိုရင် 24 နာရီအတွင်းလူကြည့်အများဆုံး Online Video စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့သလို Billboard Top 100 မှာလည်း နံပါတ် (၁၃) နေရာချိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့တင်မပြီးသေးပဲ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Album ဖြစ်တဲ့ The Album ကို မကြာခင်မှာ ထွက်ရှိတော့မယ့်အပြင် ပါဝင် Feature လုပ်ထားကြသူတွေကလည်း ခေသူမဟုတ်တွေချည်းပဲဆိုတာတွေ့ရပါသေးတယ်။ ဒါတွေအပြင်ကိုမှ အခုနောက်ဆုံးမှာ Wap သီချင်းနဲ့ US Spotify Chart ရဲ့နံပါတ်တစ်နေရာကို အချိန်တော်တော်ကြာပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Female Artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Cardi B နဲ့ တွဲဖက်သီဆိုသွားဦးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်း တော်တော်လေးကို ရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်ရမယ့် သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
August လအစောပိုင်းလောက်ကတည်းက ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ BlackPink ရဲ့ Album အသစ် “The Album” ရဲ့ Playlist အရ Black Pink အဖွဲ့နဲ့ Cardi B တို့ Collab လုပ်ထားတဲ့ “Bet You Wanna” ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ Cardi ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ Blink လေးတွေကြားမှာ အတော်လေးကို ပြန့်နှံ့နေခဲ့တာပါ။ အစပိုင်းမှာ Rumor သက်သက်အနေနဲ့သာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် အမှန်တကယ်ပါဝင်လာဖို့ သေချာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးကြတာကိုလည်း ထပ်ပြီးတွေ့ရပါတယ်။ အခုလည်း ဒီ Collab နဲ့ပတ်သက်လို့ Official ကြေညာသေးတာမဟုတ်ပေမယ့် Shazam App နဲ့ Genius လို Website တွေမှာပါ ရှာလို့ရနေပြီဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ ဒါဟာ Rumor သက်သက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေဘက်ရောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ Genius Website မှာတော့ Release Date ကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့လို့ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်သာ ဒီသီချင်းထွက်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ Cardi နဲ့ Black Pink ရဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်ကို Hit ဖြစ်ဦးမယ့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Rap တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းရွတ်တတ်တဲ့ Rap ဘုရင်မကြီး Cardi B နဲ့ Black Pink အဖွဲ့ရဲ့ Rap Queen လေး Lisa တို့ ဘယ်လိုတွေ အတွဲညီနေမလဲဆိုတာကိုလည်း Cardi B ရဲ့ Fan လေးတွေနဲ့ Blink လေးတွေက အရမ်းသိချင်နေကြပါပြီ။ ပြောကြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ Cardi B ကဒီ “Bet You Wanna” သီချင်းမှာ သူ့ရဲ့မူလစတိုင်လ်လိုမျိုး Rap စာသားခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေကို ထည့်သွင်း ရွတ်ဆိုသွားမှာမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ Cardi B ကြီးပဲ မိန်းမဆန်ဆန်နူးညံ့သွားမလား Black Pink ကပဲ နဂိုထက်ပိုပြီး အကြမ်းစားတွေလုပ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ ဒီသီချင်းထွက်လာမှပဲ သိနိုင်မှာမို့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ။
#Bet You Wanna
ဖက်ရှင်ကျချင်သူတွေ Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ Tik Tok Fashionista များ
သူတို့ရဲ့ Style နဲ့ Creativity တွေကတော့ကျွတ်ဆင်ပဲ
ဖက်ရှင်ကို Crazy ဖြစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် Instagram နဲ့ Pinterest အပြင်နောက်ထပ်အထူး ကြည့်သင့်တဲ့ Digital Platform ကတော့ Tik Tok ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ Tik Tok မှာရှိတဲ့ Fashionista တွေရဲ့ Tik Tok Account တွေမှာဆို အမိုက်စားဖက်ရှင် Tips တွေ၊ Fashion Guidelines တွေနဲ့ Catalogue ဆန်ဆန် Lookbook တွေအပြင် Aesthetic Look လိုဖက်ရှင်တွေကိုလည်း Highlight လုပ်ပြီးဖော်ပြထားတာမို့ ဖက်ရှင်ကိုလေ့လာသူတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ကျလိုသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေ Catch-Up လုပ်ထားဖို့လိုတယ်နော်။ ဒါတင်ဘယ်ကဦးမလဲ Instagram နဲ့ Facebook က Fashion Influencer တွေက Tik Tok မှာလည်း အမိုက်စား Fashion Tips တွေကိုတင်နေပြီမို့ အမြန်ဆုံးသွား Follow လုပ်လိုက်တော့နော်။
Tik Tok ကအမိုက်ဆုံး Fashion Influencer Account တွေကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သွား Follow ပြီး Fashion တွေထိမိသွားအောင်ပြင်ဆင်ဖို့ကတော့ ကိုယ့်တာဝန်နော်။
တလောကမှ ALLURE မှာ Feature လုပ်ထားတဲ့ TikTok Star လေး Ariam ကTik Tok မှာတော့ Fashion Skill တင်မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ MakeUp Look တွေကိုပါတွဲဖက်ပြီး ပြသထားပါတယ်။ အမိုက်စား Make-Up Transformation တွေအပြင် Inspired Outfit တွေကိုလည်း Cosplay အသွင်လည်းဝတ်ဆင်နိုင်သေးတယ်။
Soph ရဲ့ Video တွေမှာ ဦးထုပ်နဲ့ Bandana မပါတဲ့ Video ဆိုတာခပ်ရှားရှားလို့ပြောရမှာပါ။ သူ့ Style တွေကကျ Oversized တွေ၊ ခပ်လန်းလန်းအတွဲအစပ်တွေကို ပညာသားပါပါဝတ်ပြထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် DIY Item နဲ့ Closet Tour တွေလုပ်ရတာကြိုက်ပြီး သူ့ Fan တွေကိုလည်း Trend ကိုမကြည့်ပဲ ကိုယ်နှစ်သက်သလိုဝတ်ဖို့ အားပေးတတ်သူပါ။
Instagram အရမ်းသုံးတဲ့သူတိုင်း ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် Brittany ကိုသိကြပါတယ်။ အခုတော့ Brittany ကသူ့ရဲ့ Instagram Follower တွေကို TikTok ကိုလည်းခေါ်ဆောင်လာပါပြီ။ သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Street-Style Ready Look တွေနဲ့ နေရာ Occasion အလိုက်ဘယ်လို Dress Up လုပ်ရမလဲဆိုတာ သူ့ Video တွေကိုပဲကြည့်လိုက်ပါ။
Plus Size Girl လေးတွေလည်းဖက်ရှင်ကျအောင်ဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို Anna ကသက်သေပြသွားတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ Style Inspiration တွေကတော့ Bold Print တွေ၊ Bright Color တွေကိုချစ်စရာကောင်းအောင် ဝတ်ဆင်ပြသွားနိုင်တာပါ။ သူ့ Video လေးတွေက Happy Vibe ဖြစ်စေတာတော့အမှန်ပဲ။
Taylor ကတော့ Minimalist Style လေးတွေကို သူ့လိုအထာကျကျဝတ်ကြည့်လို့ရအောင် Video တွေမှာ Step-By-Step ပြထားပါတယ်။ ပြီးရင် Taylor ရဲ့ Styling Video လေးတွေကကြည့်ရတာ Entertaining ဖြစ်တယ်။ Editor ဆိုသူ့ Outfit လေးတွေကြည့်ပြီး လိုချင်နေရော။
JESSICA WANG, @JESSICAWANGOFFICIAL
ဆရာမကြီး Jessica Wang ကတော့ Editor ကိုယ်တိုင် Instagram မှာ အမြဲ See First ဖြစ်နေတဲ့ Fashion Influencer ပါ။ Jessica ရဲ့ TikTok မှာတော့ Fashion Tips တွေအပြင် Instagram မှာ အမိုက်စားပုံတွေ ဘယ်လိုရိုက်လို့ရမလဲ၊ ဘယ်လို Pose ပေးရမလဲ၊ Camera ကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတဲ့ Hack တွေလည်းပါတယမို့ Must-Follow နော်။
NAVA ROSE, @THE.NAVAROSE
အမိုက်စား Latest Fashion တွေနဲ့မြူးကြွတဲ့ Dance Tutorial တွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ Nava Rose ရဲ့ TikTok တွေကမကြည့်မဖြစ်လို့ပြောရမှာပါ။ အရမ်း Active ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲဖက်ရှင်တွေကလည်း လူငယ်ဆန်ပြီး အမြဲ Fresh and Vibrant ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Fashion Youtuber လေး Lim ရဲ့ Fashion Video တွေက Youtube မှာတည်းကမိုက်နေပြီးသားဆိုတော့ TikTok မှာတော့ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ဘူးနော်။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့ Video လေးတွေမှာ သူမ Babies လေးတွေနဲ့ပါ ချစ်စရာကောင်းအောင်ရိုက်ကူးထားတာပါ။
Keri Fay ရဲ့ TikTok မှာတော့ သူ့ရဲ့ Shoe Collection တွေကို အားကျဖို့ပြင်ထားပေတော့။ Keri TikTok တွေမှာတော့ Sporty ဆန်ဆန် Loose Outfit တွေ၊ Cozy ဖြစ်တဲ့ အတွဲအစပ်တွေကို မျက်စိအေးစေမယ့် Muted Color လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ထားတာများပါတယ်။ Comy Outfit တွေကို ဘယ်လို Stylish ဖြစ်အောင်ဝတ်ရမလဲသိချင်ရင် သူ့ TikTok ကိုသာ Follow ထားလိုက်ပါ။
Billie ကတော့ သင့်အတွက် Fashion Best Friend လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Fashion Week တွေကိုလည်းမကြာခဏသွားနေသူမို့ ဖက်ရှင်ကို ဘယ်လို Upgrade လုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိသူပါ။ Graphic Tees နဲ့ Puffy Sleeve Top တွေကို အမိုက်ဆုံးဖြစ်အောင် Styling လုပ်နိုင်သလို Celebrity Look တွေကိုလည်း ပေါ်လွင်အောင် Recreate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူမရဲ့ Aesthetic Style တွေကကျ 90's Era Fashion ဘက်ကိုပိုသွားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Flannel Shirt တွေ၊ Crop Tops နဲ့ Denim တွေများတယ်။ Jess ရဲ့ Account မှာ Thrifting Hauls နဲ့ 2020 မှာ Influence အဖြစ်ဆုံး Outfits တွေကိုပြထားတဲ့ Video တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။